Kheyraadka Waalidka ee Waxbarashada Gaarka ah | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaan ku dhiirigalinaynaa waalidiinta ardayda waxbarashada gaarka ah inay door firfircoon kaqaataan qorshaynta waxbarashada cunugaaga iyo hanaanka IEP. Cilmi-baaris ayaa muujisay in carruurta iyo dugsiyaduba ay ka faa'iideystaan ka-qaybgalka waalidka.
Waalidiinta waxay had iyo jeer qabaan su'aalo la xiriira habsami u socodka nidaamka waxbarashada gaarka ah. Ujeedada degelkani waa inay ku siiso macluumaad waxtar leh oo loo baahan yahay si loogu doodo ilmahaaga baahiyaha waxbarashada gaarka ah.
Degello waxtar leh
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota - Barnaamijyada Waxbarashada Gaarka ah
Shakhsiyaadka Sharciga Waxbarashada Naafada
Macluumaad La Soo Degsan Karo
Gawaarida Gaarka ah ee Gaarka ah
Qeybta Adeegyada Baxnaaninta : Waxay ka caawisaa dadka naafada ah inay u diyaar garoobaan, helaan oo haystaan shaqo, iyo taageerida nolol madax bannaan.
Mashruuca SOAR : Siinta dadka waaweyn ee naafada ah fursad ay kaga qayb galaan barnaamijyada Waxbarshada Bulshada.
REACH for Kheyraadka : U fidinta adeegyo shaqsiyeed gooni isu taag, kaqeybgal bulshada iyo wanaajinta jirka iyo maskaxda.
Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Minnesota : Bixinta tababarka isboortiga sanadka oo dhan iyo dhacdooyinka 17 isboorti oo u eg qaab ciyaareedka Olombikada ee dhammaan da'da iyo heerarka xirfadeed.
Canug walba oo ku nool Minnesota wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho guud oo bilaash ah oo habboon. Dugsiyada ku yaal Minnesota waxay leeyihiin waajibaad sharci ah inay si ku habboon u aqoonsadaan carruurta iyo dhallinyarada naafada ah. Dugsiyada sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan xiriir xiriiriye dhaqameed qoysaska sidii loogu baahdo. Haddii la codsado, xiriiriyaha dhaqanka ayaa lagu dari karaa shirarka laga yaabo inay ku lug yeeshaan wadahadallada ku saabsan ka-hor-u-diritaanka adeegyada gaarka ah sida waxbarashada gaarka ah. Xiriiriyaha dhaqanka ayaa sidoo kale lagu dari karaa shirarka loogu talagalay ardayda horeyba u helay adeegyo gaar ah.
Xiriiriyaha dhaqanka waxaa lagu qeexaa inuu yahay qof isku jinsiyad, dhaqan, dhaqan dhaqaale, ama luqadeed sida ardayga:
Waxay siisaa kooxda Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) macluumaad ku saabsan jinsiyadda ardayga, dhaqankiisa, dhaqan-dhaqaale, iyo afkiisa.
Waxay ka caawisaa kooxda IEP fahamka sida cunsuriyada, dhaqanka, dhaqan-dhaqaale, iyo arrimaha luqadeed ay saameyn ugu yeeshaan horumarka waxbarashada.
Waxay sahlaysaa fahamka waalidka ardayga iyo kaqeybgalka geedi socodka waxbarashada gaarka ah.
Haddii qof isku midab, dhaqan, dhaqan dhaqaale, ama luqadeed uu ka soo jeedo ardeyga aan la heli karin, markaa qof aqoon u leh asalka ardeyga, dhaqankiisa, dhaqankiisa dhaqaale, iyo luqadeed wuxuu u dhaqmi karaa sidii isku xiraha dhaqanka ( Xeerka Minnesota 3525.0200).
Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE)
Waxbarashada Gaarka ah /